အမှန်တကယ် အသက် ဝင်လာပြီဖြစ်သော Dr ဇော်ဝေစိုး ၏ သတိပေး စကားများ – Shwe Yoe
အမှန်တကယ် အသက် ဝင်လာပြီဖြစ်သော Dr ဇော်ဝေစိုး ၏ သတိပေး စကားများ
Shwe S N | September 5, 2021 | Knowledge | No Comments
အမှန်တကယ် အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်သော DR.ဇော်ဝေစိုး၏ သတိပေးစကားများ သို့ စစ်ပွဲကို အဆူံးသတ်သူဟာ NUG မဟုတ်ပဲ ချီနား ဖြစ်နေမလား
အားလုံး မြင်ကြား သိစေလိုသည့် အောင်ပွဲအနိုင် သုံးသပ်မှုထက် မြေပြင် ပကတိသတင်း မှန်ကတော့ ဇွန်ကောရှန် ဒီလာတယ်
မအလတို့ ၀မ်းမသာနိုင်ဘူး မကြိုဆိုဘူး သတင်းပိတ် ထားတယ် အကယ်၍ ချီနား သာ အရင်လို သူ့ဘက်ပါရင် အရင်ဦးဆုံး မော်ကြွားမှာ အောင်နိုင်သူကြီး သဖွယ်ဟန်နဲ့ ခုတော့ ဖိအား လာပေးပြီး သူ့အကျိုး စီးပွားတွေ ကာကွယ်ပေးဖို့ လာဆော်ဩလို့ မကြို သတင်းပိတ်နဲ့ မတတ်သာလို့ လက်ခံ လိုက်ရတဲ့ပုံ ဖြစ်နေတယ်
ဒီတော့ ချီနား က အာဏာ မထိန်းနိုင်ရင် NUG နဲ့ပဲ ပူးပေါင်းမယ့်ဟန် ခြေလှမ်း ပြသွားပြီး DASSK နဲ့ တွေ့ခွင့် တောင်းတယ် မအလက တွေ့ခွင့် မပေးဘူးတဲ့
ဒါကိုက ချီနား နဲ့ အဆင်မပြေ အားမကိုး တော့ဘူးဆိုတာ ပေါ်လွင်နေသလို DASSK နဲ့ တွေ့ပြီး အဆင်ပြေသွားမှာ သူတို့ကို ထိုးချမှာ ကြောက်နေ ကြပြီ ဖြစ်တယ်
ဒီတော့ ဟန်မဆောင် နိုင်အောင်ကိုပဲ စိုးဝင်းကို ရှရှားလွတ် ချီနား ကိုပါ ငါတို့ ရှရှားနဲ့ပဲ ပူး‌ပေါင်း တော့မယ် မင်းတို့ စကား နားမထောင်‌တော့ဘူး ဟန်နဲ့ လုပ်ပြပြီး ဖြစ်လာမည့် စစ်ပွဲအတွက် ကြိုပြင်ပြီး အဆုံးထိ တောင့်ခံ တိုက်သွားဖို့ လုပ်ဆောင်ပုံ ဖော်ပြနေတယ်
ဒီတော့ ယခုပွဲ ချီနား က သူ့အကျိုးအတွက် ရှောင်ပြီး ယခုသတင်းကို သူတို့ဘက်ကနေ စတင်ထုတ်မှ မအလနဲ့ ဆွန်ကောရှန် တွေ့ဆုံကြောင်း ကမ္ဘာသိလာတယ်
ဒီတော့ မအလတို့ ဘက်က စမထုတ်တာက ဒီပွဲ ချီနားက သူတို့ဘက်ပါပြီး ကူညီမပေး လို့ပဲဖြစ်သည်‌ဆိုတာနဲ့ မအလနဲ့ ချီနား အဆင်မပြေ ခွာပြဲနေပြီဆိုတာ သိသာနေစေတယ်
ဒါကြောင့် အရေးတယူနဲ့ အနိုင်ရကြွားဝါခြင်း မပြုနိုင်ပဲ အောက်ဖဲ သက်သက်ဖြင့် ပွဲကို တည်ထားရသည်ဆိုတာ သိမြင်စေပါတယ်
ဒါကြောင့် ဒီပွဲ ပေါက်ကောင် လက်ရှောင်ပြီ ..ထိုအတွက် သူအကျိုးစီးပွား မထိခိုက်စေဖို့နဲ့ အာဏာ အမြန်ဆုံး ထိန်းနိုင်အောင် မထိန်းနိုင်ရင် NUG နဲ့ ဆက်ဆံမည်ဟုဆိုပြီး NLD မဖျက်သိမ်းဖို့ပြော DASSK နဲ့ တွေ့ဆုံမည် ကမ်းလင့်တာပဲ
ဒီတော့ စကစ မအလတို့ဘက်မှာ ရုရှားပဲ ရှိတော့တယ် ချီနားက စစ်မဖြစ်အောင် တက်နိုင်သလောက် ကာဗာလုပ် လမ်းကြောင်းလွှဲနိုင်ဖို့ ထိန်းကြောင်းနေအုံးမှာပဲ UN အာဆီယံ အချက်တွေနဲ့ ဖိအားပေး ပြောဆိုပြီး
ဒါကိုမှ ရှေ့ဆက် တိုးမယ်ဆို စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ဖို့ NUG မဟုတ်ပဲ ချီနား တျုတ်သာဖြစ်လာ လိမ့်မည်လားဆိုတာ
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ထိုအကွက်ကို လုပ်လိုက်ရင် တျုတ်ဟာ … သူ့အကျိုးစီးပွားလည်း မထိခိုက်သလို- နောင်တက်လာမည့် NUG အစိုးရနဲ့လည်းအဆင်ပြေ
ပြည်သူများမှလည်း ကျေးဇူးတင် လက်ခံနဲ့ ဆက်လျက်ပြီး မြန်မာပြည်တွင်း ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှု တွေဆက်လျက် လုပ်ကိုင်စေကာ
ချီနား ဟာ သူ၏ ကျဆင်းနေတဲ့ ပုံရိပ်ကို ဒီအကွက်နဲ့ ဆွဲစား ဖြည့်တင်း အရယူသွားမလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှပါသည်ဟု
သို့သော် ဒီအချက်တွေသည် NUG ခင်းကျင်းထားသော ဗျုဟာ ကစားကွက်‌တွေကြောင့် ဖြစ်သည်ဆိုတာနဲ့
သို့ကြောင့် NUG မှလည်း ထိုအချက်‌တွေကို သိ၍ နိုင်ငံရေးအရ အသာစီးရယူထားမှုနဲ့ စကစမှ ထုတ်သမျှ လုပ်သမျှ တရားမ၀င် ဘူးဆိုတာ ကြေငြာချက်တွေ ထုတ်ပြန်နေခြင်းဖြင့် ချီနား တုန်လှုပ်နေ ၊ အကြောင်းက သိန်းစိန် လက်ထက်က စာချုပ်တွေကို DASSK မှ အကုန် ပြောင်းလဲ ပြန်ချုပ်ခဲ့ခြင်း ကြောင့် ယခု စကစအကျမှာ ထိုသို့ ထပ်ဖြစ်မည် စိုးရိမ်နေ
သို့ဖြင့် ယခု ကစားပွဲ အဆုံးသတ်ဖို့အတွက် NUG ဟာ ….ကမ္ဘာနဲ့ ပြည်သူလူထု ထောက်ခံမှုကို အပြည့်အ၀ အရယူပြီး စကစကို ဖြုတ်ချဖို့
0.4 ရာခိုင်နှုန်း အလိုနဲ့ အချိန်တိုတွင်း အောင်မြင် အနိုင်ရမည့် စစ်ပွဲဆိုတာကို.. ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးအား ၀မ်းသာ ပျော်ရွှင်စေနိုင်ဖို့နဲ့ သိရှိနိုင်အောင် ကြိုတင်အသိပေးနေပြီး
ယခုပွဲ အောင်မြင်ဖို့ ကြိမ်းသေပေါက် သတိပေး ဆော်ဩနေခြင်းပဲဆိုတာ…. အရေးတော်ပုံ အောင်နေပြီဟု အားလုံး မြင်ကြား သိစေလိုသည် Crd မင်းကြည်ညိုနေ
အမှနျတကယျ အသကျဝငျလာပွီဖွဈသော DR.ဇျောဝစေိုး၏ သတိပေးစကားမြား သို့ စဈပှဲကို အဆူံးသတျသူဟာ NUG မဟုတျပဲ ခြီနား ဖွဈနမေလား
အားလုံး မွငျကွား သိစလေိုသညျ့ အောငျပှဲအနိုငျ သုံးသပျမှုထကျ မွပွေငျ ပကတိသတငျး မှနျကတော့ ဇှနျကောရှနျ ဒီလာတယျ
မအလတို့ ဝမျးမသာနိုငျဘူး မကွိုဆိုဘူး သတငျးပိတျ ထားတယျ အကယျ၍ ခြီနား သာ အရငျလို သူ့ဘကျပါရငျ အရငျဦးဆုံး မျောကွှားမှာ အောငျနိုငျသူကွီး သဖှယျဟနျနဲ့ ခုတော့ ဖိအား လာပေးပွီး သူ့အကြိုး စီးပှားတှေ ကာကှယျပေးဖို့ လာဆျောဩလို့ မကွို သတငျးပိတျနဲ့ မတတျသာလို့ လကျခံ လိုကျရတဲ့ပုံ ဖွဈနတေယျ
ဒီတော့ ခြီနား က အာဏာ မထိနျးနိုငျရငျ NUG နဲ့ပဲ ပူးပေါငျးမယျ့ဟနျ ခွလှေမျး ပွသှားပွီး DASSK နဲ့ တှခှေ့ငျ့ တောငျးတယျ မအလက တှခှေ့ငျ့ မပေးဘူးတဲ့
ဒါကိုက ခြီနား နဲ့ အဆငျမပွေ အားမကိုး တော့ဘူးဆိုတာ ပျေါလှငျနသေလို DASSK နဲ့ တှပွေီ့း အဆငျပွသှေားမှာ သူတို့ကို ထိုးခမြှာ ကွောကျနေ ကွပွီ ဖွဈတယျ
ဒီတော့ ဟနျမဆောငျ နိုငျအောငျကိုပဲ စိုးဝငျးကို ရှရှားလှတျ ခြီနား ကိုပါ ငါတို့ ရှရှားနဲ့ပဲ ပူး‌ပေါငျး တော့မယျ မငျးတို့ စကား နားမထောငျ‌တော့ဘူး ဟနျနဲ့ လုပျပွပွီး ဖွဈလာမညျ့ စဈပှဲအတှကျ ကွိုပွငျပွီး အဆုံးထိ တောငျ့ခံ တိုကျသှားဖို့ လုပျဆောငျပုံ ဖျောပွနတေယျ
ဒီတော့ ယခုပှဲ ခြီနား က သူ့အကြိုးအတှကျ ရှောငျပွီး ယခုသတငျးကို သူတို့ဘကျကနေ စတငျထုတျမှ မအလနဲ့ ဆှနျကောရှနျ တှဆေုံ့ကွောငျး ကမ်ဘာသိလာတယျ
ဒီတော့ မအလတို့ ဘကျက စမထုတျတာက ဒီပှဲ ခြီနားက သူတို့ဘကျပါပွီး ကူညီမပေး လို့ပဲဖွဈသညျ‌ဆိုတာနဲ့ မအလနဲ့ ခြီနား အဆငျမပွေ ခှာပွဲနပွေီဆိုတာ သိသာနစေတေယျ
ဒါကွောငျ့ အရေးတယူနဲ့ အနိုငျရကွှားဝါခွငျး မပွုနိုငျပဲ အောကျဖဲ သကျသကျဖွငျ့ ပှဲကို တညျထားရသညျဆိုတာ သိမွငျစပေါတယျ
ဒါကွောငျ့ ဒီပှဲ ပေါကျကောငျ လကျရှောငျပွီ ..ထိုအတှကျ သူအကြိုးစီးပှား မထိခိုကျစဖေို့နဲ့ အာဏာ အမွနျဆုံး ထိနျးနိုငျအောငျ မထိနျးနိုငျရငျ NUG နဲ့ ဆကျဆံမညျဟုဆိုပွီး NLD မဖကျြသိမျးဖို့ပွော DASSK နဲ့ တှဆေုံ့မညျ ကမျးလငျ့တာပဲ
ဒီတော့ စကစ မအလတို့ဘကျမှာ ရုရှားပဲ ရှိတော့တယျ ခြီနားက စဈမဖွဈအောငျ တကျနိုငျသလောကျ ကာဗာလုပျ လမျးကွောငျးလှဲနိုငျဖို့ ထိနျးကွောငျးနအေုံးမှာပဲ UN အာဆီယံ အခကျြတှနေဲ့ ဖိအားပေး ပွောဆိုပွီး
ဒါကိုမှ ရှဆေ့ကျ တိုးမယျဆို စဈပှဲကို အဆုံးသတျဖို့ NUG မဟုတျပဲ ခြီနား တြုတျသာဖွဈလာ လိမျ့မညျလားဆိုတာ
ဘာကွောငျ့ဆိုတော့ ထိုအကှကျကို လုပျလိုကျရငျ တြုတျဟာ … သူ့အကြိုးစီးပှားလညျး မထိခိုကျသလို- နောငျတကျလာမညျ့ NUG အစိုးရနဲ့လညျးအဆငျပွေ
ပွညျသူမြားမှလညျး ကြေးဇူးတငျ လကျခံနဲ့ ဆကျလကျြပွီး မွနျမာပွညျတှငျး ရငျးနှီးမွုတျနှံမှု တှဆေကျလကျြ လုပျကိုငျစကော
ခြီနား ဟာ သူ၏ ကဆြငျးနတေဲ့ ပုံရိပျကို ဒီအကှကျနဲ့ ဆှဲစား ဖွညျ့တငျး အရယူသှားမလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာ ကောငျးလှပါသညျဟု
သို့သျော ဒီအခကျြတှသေညျ NUG ခငျးကငျြးထားသော ဗြုဟာ ကစားကှကျ‌တှကွေောငျ့ ဖွဈသညျဆိုတာနဲ့
သို့ကွောငျ့ NUG မှလညျး ထိုအခကျြ‌တှကေို သိ၍ နိုငျငံရေးအရ အသာစီးရယူထားမှုနဲ့ စကစမှ ထုတျသမြှ လုပျသမြှ တရားမဝငျ ဘူးဆိုတာ ကွငွောခကျြတှေ ထုတျပွနျနခွေငျးဖွငျ့ ခြီနား တုနျလှုပျနေ ၊ အကွောငျးက သိနျးစိနျ လကျထကျက စာခြုပျတှကေို DASSK မှ အကုနျ ပွောငျးလဲ ပွနျခြုပျခဲ့ခွငျး ကွောငျ့ ယခု စကစအကမြှာ ထိုသို့ ထပျဖွဈမညျ စိုးရိမျနေ
သို့ဖွငျ့ ယခု ကစားပှဲ အဆုံးသတျဖို့အတှကျ NUG ဟာ ….ကမ်ဘာနဲ့ ပွညျသူလူထု ထောကျခံမှုကို အပွညျ့အ၀ အရယူပွီး စကစကို ဖွုတျခဖြို့
0.4 ရာခိုငျနှုနျး အလိုနဲ့ အခြိနျတိုတှငျး အောငျမွငျ အနိုငျရမညျ့ စဈပှဲဆိုတာကို.. ပွညျသူလူထု တရပျလုံးအား ဝမျးသာ ပြျောရှငျစနေိုငျဖို့နဲ့ သိရှိနိုငျအောငျ ကွိုတငျအသိပေးနပွေီး
ယခုပှဲ အောငျမွငျဖို့ ကွိမျးသပေေါကျ သတိပေး ဆျောဩနခွေငျးပဲဆိုတာ…. အရေးတျောပုံ အောငျနပွေီဟု အားလုံး မွငျကွား သိစလေိုသညျ Crd မငျးကွညျညိုနေ
ဘာလုပ်လုပ် အဆင်မပြေ ကံနိမ့်တယ် လို့ ခံစားနေ ရ ရင် ဒီနည်းလမ်းလေး သုံးကြည့်ပါ
Covid-19 နှင့် Mask အ လွဲ များ
လူထွက်ပြီး မိန်းမယူကျတဲ့ ဦးဇင်းတွေ အပေါ် မှတ်ချတ်ပေး တဲ့ ဘုန်းကြီး ကို ပညာပြလိုက်တဲ့ ကပ္ပိယကြီးရဲ့ အဖြစ်